Why Do We Blog ??? | Layma's World
« Blog ကဗျာ… August လမှာ အကြိုက်ဆုံး… »
Tesla, on September 3, 2007 at 3:57 am said:
ဓါတ်ပုံဘယ်နေရာက ရိုက်သွားလည်း ဆိုတာကြည့်သွားတယ်..။ ဘေးနားမှာ ကောင်မလေး နောက်တယောက်လည်း ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်သွားတယ်.။ ဒုတိယပိုင်း အချိန်ဆို တာကိုပါ ထည့်တွက်လိုက်မယ်.။ စိုးဇေယျ လှည့်ထွက် သွားတဲ့ နေရာကိုလည်း သိတယ်.။ ယုံလားတော့ မသိဘူး ခမ်းမထဲ ၀င်လာတဲ့ လူမပြောနဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တောင် မလွတ်အောင် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတယ်.။ ပြန်ရှာလိုက်ယုံပါပဲ..။ ဟော့ဒီမှာ မလေးမ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်မတက် လာစေချင်ရင် မုန့်အမြန် လာကျွှေးပါ..။ 😛
သန့်ဇော်မင်း, on September 3, 2007 at 4:18 am said:
ကျွန်တော်နဲ့ နှင်းမိုးဝေ၊ မောင်ပွတ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်၊ စိတ်ကူးတို့ ပြောနေတာတွေကို ကြားတယ်ဆိုတော့..
ခန်းမရဲ့ အလယ်၊ အနောက်နားမှာဗျို့.. ..
ဟဲဟဲ.. မမလေး.. ခုလို့ တိတ်တိတ်လေး လာသွားလို့ ဘယ်ရမလဲ
ကျွန်တော်ဗျာ.. မမလေးရဲ့ လက်မှတ်လေးတွေလို့ အားလုံးကို လိုက်မေးနေတာ.. မတွေ့ကြဘူး… ဆိုလို့…
Layma, on September 4, 2007 at 9:37 am said:
ကိုTesla…. ခြေရာခံပုံခံနည်းကတော့ တကယ့်နိုင်ငံရှော်တွေ အတိုင်းပါပဲ … ။ ပုရွက်ဆိတ်မလွတ်ပေမဲ့ လေးမ လွတ်ရင်လွတ်မှာပေါ့… ဟီး…စတာပါ…. မုန့် လာကျွေးသွားတယ်လေ…. မုန့် လေပွေမရဘူးဆိုတော့ ဘာကျွေးရမှန်းမသိတော့ဘူး….။
ကိုTzm…. ဟဲ…ဟဲ … ကိုသန့် တို့ ဘေးနားမှာပဲထိုင်နေတာလေ… မတွေ့ ဘူးလား… နောက်တခါ အတင်းအုပ်ရင် ဆင်ခြင်ပါ… မမလေးမို့ လို့ ပေါ့ကွာ … တခြားသူဆိုရင်တော့…။
သန့်ဇော်မင်း, on September 5, 2007 at 3:08 am said:
မမလေး.. ကျွန်တော်သိပါတယ်… စုံထောက်လုပ်လိုက်တော့…
ယုဆဂိကိုတော့ ဦးသိန်းမိတ်ဆတ်ပေးလို့ တွေ့လိုက်တယ်
ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိတဲ့ မမလေးဓာတ်ပုံက မျက်နှာမမြင်ရဘူး.. 😀
တခြားပုံတွေကို ကျွန်တော်သွားမယူရသေးဘူးနော်.. ယူပြီးပို့ပေးမယ်..
Layma, on September 6, 2007 at 10:32 am said:
သန့်ဇော်မင်း, on September 6, 2007 at 12:47 pm said:
အင်း.. မျက်နှာပါတဲ့ ပုံကို ရအောင် ရှာဦးမှာ..
ဆီမီနာမှာ ရိုက်တဲ့ ပုံ အားလုံးပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်တယ်..
မယုံမရှိနဲ့.. ယင်ကောင်တောင် မလွတ်ဘူး.. တကယ်
sisain, on September 9, 2007 at 12:19 am said:
ဓာတ်ပုံအားလုံး ကိုင်ထားတဲ့သူက ဘာမှမပြောရဘူး။ မောင်တက်တို့၊ သန့်သန့်တို့ ဒီမှာ လေထွားနေကြတယ်။
ဘလော့ခ်ပွဲ လာသွားတာ ခုမှသိပါတယ်။ ကောင်းပါ့-
Saturngod, on September 9, 2007 at 7:46 am said:
ကယ်လီစပွန် က ဘာလုပ်မလို့လဲ… iPod ဖြစ်ဖြစ်.. PS3 ဖြစ်ဖြစ်… ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း PDA တစ်လုံးလောက်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်.. Laptop ပေးလို့လည်း စိတ်ဆိုးဘူး… ကယ်လီစပွန်က ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်မဟုတ်လား.. ရေးရင်းနဲ့တောင် ချောင်းဆိုးချင်လာပြီ…
Layma, on September 9, 2007 at 3:17 pm said:
ကိုသန့် ….ယင်ကောင်မှမရှိတာ … စုံထောက်ကြီးကလဲ ဇွဲမလျှော့ပါလား ….။
ကိုစစ်အိမ်….ဂလိုလား… သူတို့ လက်ထဲမှာ ဘာမှမရှိဘဲနဲ့လေးမ ကို ခြောက်စားလုပ်နေကြတာပေါ့ …။ဟွန်း..ဟွန်း… လုံးဝမကြောက်တော့ဘူး ….။
ကိုစေတန် …. “သင့်ရင်သွေးကို အစားစားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် ကယ်လီစပွန်တိုက်ပါ” လို့ ကြော်ငြာတာတွေ့ ဖူးလို့… ဟီး … Laptop လား..ဘယ်နှစ်လုံးလိုချင်လဲသာပြောလိုက် … ရစေရမယ် …။
Remar, on March 22, 2010 at 9:57 pm said: